प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र ‘छिट्टै’को शब्द-विमर्श | Ekhabaronline.com
21 November 2017| मङ्लबार, मंसिर ५, २०७४
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र ‘छिट्टै’को शब्द-विमर्श
लक्ष्मी लम्साल | प्रकाशित मितिः बुधबार, चैत्र १६, २०७३ 7:27:06 PM | 144 पटक पढिएको |
बेइजिङ: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण अन्ततः बिना कुनै सम्झौतामा टुङ्गिने भएपछि उत्तर यात्रालाई सद्भावना भ्रमणमा रुपान्तरण गरियो। ‘छिट्टै’ अर्थात् हतारमा गरिएको भ्रमणका कारण तयारी गर्न नपाएको वा चीनकै अनिच्छाले सम्झौता हुन नसकेको भनेर सरकारको बचाउ गरियो।
वर्तमान सरकारका प्रतिनिधिहरुको निरन्तरको दक्षिण भ्रमणको क्रमभङ्ग हुँदै गर्दा यसपटक चाहिं राष्ट्रको कार्यकारीले उत्तर भ्रमण गरी केही महत्वपूर्ण विकासको आकार कोर्ने आशा थियो। तर भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ नेताहरुसँग जसरी भेटे, सबैमा ‘छिट्टै’को प्रतिबद्धता जनाए र उस्तै ‘छिट्टै’को अमूर्त आश्वासन पनि पाए।
प्रचण्डले भ्रमणका दौरान चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङ, दुईजना उपप्रधानमन्त्री चाङ् गाओली र वाङ् याङ्, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागका महानिर्देशक सुङ् थौसँग भेटे। मुख्यतः राष्ट्रपति सी र उपप्रधानमन्त्री चाङ सँगको भेटका अलावा अन्य मञ्चहरुमा पनि प्रचण्डले मुख्यगरी केही महत्वपूर्ण विषय पनि उठाए।
चीनको एक पेटी एक मार्गमा नेपालको समर्थन, एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता, तातोपानी नाका पुनः संचालन तथा अन्य नाकाहरु संचालन, चिनियाँ लगानी, आपसी सहकार्य, जस्ता कुरामा ‘छिट्टै’ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पाए, प्रतिबद्धता जनाए।
सोमबार ग्रेट हल अफ द पिपुल्समा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन फिङ्गलाई भेट्न गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कम्युनिष्ट स्टाइलले झ्याक्कझुक्क पार्दै हात पनि मिलाए। तर सीले फोटो पत्रकारसामु घनिष्ठ फोटो खिचाउनका लागि प्रचण्डलाई झट्कारेर नजीकै ताने। प्रचण्डलाई ‘छिट्टै’ नजिक्याउनका लागि मात्रै नभएर उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको स्टाइलले झट्कार्नुले ‘छिट्टै नजिक आऊ’ भन्ने कूटनीतिक संकेत दिएको थियो। भेटका दौरान जे जति संवाद भैरहेको थियो, प्रचण्डले छिटछिटो कुम र टाउको हल्लाएको प्रतीत हुन्थ्यो। भेटवार्तापछि उनले भने कि आपसी विश्वास बढेको महसुस भयो। प्रचण्डले धेरै उपलब्धि भएको सोचे तर तत्काल कुनै लिखित सम्झौता नभएकाले ‘छिट्टै’ सम्झौता हुने पनि बताए।
बोआओ एशियाली मञ्चको वार्षिक सम्मेलनका दौरान उपप्रधानमन्त्री चाङ् काउ ली सँगको भेटमा उनले एक पेटी एक मार्गमा ‘छिट्टै’ हस्ताक्षर गरी चिनियाँ विकासको धारमा लपेटिने प्रतिवद्धता जनाए। सन् २०१३ को अन्त्यतिर चिनियाँ राष्ट्रपतिले ओबीओआरको अवधारणा सार्वजनिक गरेकै चार वर्ष पुग्दैछ। नेपालले प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको पनि वर्षदिन पुगिसकेको छ। यस बीचमा नेपाली पक्षलाई मनाउनका लागि चिनियाँ प्रतिनिधिहरुले बारम्बार नेपालको भ्रमण गरिसकेका छन्। ती प्रत्येक भ्रमणदेखि हालसम्म प्रतिबद्धताको उस्तै आवाज छ- छिट्टै। तर त्यो ‘छिट्टै’ भनेको कति दिन, हप्ता, महिना वा वर्षको अवधि हो यकिन छैन।
२०७२ साल वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि पुनः मर्मत भइसकेको तातोपानी नाका खुलाउनका लागि चीनले ‘छिट्टै’ खुलाउने आश्वासन मात्रै दिएको वर्ष नाघिसक्यो। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि हालै चीन यात्रा गरेका प्रचण्डले पनि तातोपानी नाका खुलाउने आग्रह दोहोर्‍याए। त्यति मात्रै नभएर नेपाल भ्रमणमा गएका रक्षामन्त्री छाङ् वान छ्वानले पनि ‘छिट्टै’ आश्वासन दिएर फर्किए। कुनै उच्चस्तीय भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा कुनै न कुनै प्रतिनिधि मण्डलले तातोपानी नाका खुलाइदिन ज्ञापनपत्र पनि दिने गरेको छ। त्यतिखेर ती नेताहरुले पनि ‘छिट्टै’ खुलाउनका लागि आग्रह गर्ने प्रतिबद्धता दिएर फर्काउँछन् जसरी चिनियाँ नेताहरुले ‘छिट्टै’को आश्वासन दिने गर्दछन्। चिनियाँ पक्षले तातोपानी नाका खुलाउन आलटाल गर्नुको अन्तर्य के हो र कसरी चीनलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान नदिएर एकोहोरो नाका खोल्देऊ कि खोल्देऊ भनेर नेपाली पक्ष कराइरहेछ। चीनले पनि जवाफमा उस्तै ‘छिट्टै’को वाक्य दोहोर्‍याउने गरेको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस भ्रमणका सिलसिलामा बेइजिङ्गस्थित नेपाली दूतावासमा भेटिएका चिनियाँहरु र नेताहरु समक्ष पनि एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिवद्धता दोहोर्‍याए। दलाई लामासँग एउटै मञ्चमा बसेको छर्लङ्गै हुँदा हुँदै पनि नेपाली नेताहरुले प्रतिवाद गर्दा र पछिल्ला अन्य केही गतिविधिले एकचीन नीतिप्रतिको फितलो प्रस्तुतीले चीनलाई प्रायः सशंकित नै पारिराख्या बेला नेपाली नेताहरुले जतिसक्दो‘छिट्टै’प्रतिवद्धता दोहोर्‍याइराख्नु राख्नुपर्ने नै देखिन्छ। जति छिटो उही वाक्य दोहोर्‍याइरहँदा पनि चिनियाँ पक्ष किन यही सुनिरहन चाहन्छ? के नेपालका नेताहरुको बोली र व्यवहारमा तादात्म्यता छैन भन्न खोजिएको हो?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रसुवा, काठमाडौं, पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलवे निर्माण, इनर्जी कनेक्टीभिटी, ट्रान्जिट प्रोटोकल, पूर्वाधार विकास, पेट्रोल भण्डारण, टान्समिसन लाइन, इकोनोमिक जोनसहितका विभिन्न विषयमा दुई पक्षीय सहमतिको कुरा उठाए। रेलवे, ट्रेड, कनेक्टिीभिटी, पूर्वाधार विकास लगायत सबै विषयमा चीन सकारात्मक नै छ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा नेपाल-चीन सीमापार विद्युत प्रसारण लाईनको परियोजनामा सम्झौता हुन नसक्नुको असर इनर्जी कनेक्टीभिटीमा परेकै छ। प्रधानमन्त्री तहमा थप सम्झौता गरेर संयन्त्र बनाउने चिनियाँ कम्पनीको योजना थियो। जे भएपनि प्राविधिक अध्ययन गरेर पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि तिब्बतले आगामी अप्रिलमा अध्ययन टोली नेपाल पठाउँदैछ।चिनियाँ प्राविधिक टोलीले रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबारे अध्ययन गर्नेछ। यी लगायत अन्य चुस्त रुपमा हुनुपर्ने कामका लागिसहमति र कार्यान्वयनको वातावरण कहिले बनाउने भन्ने सवालमा प्रधानमन्त्रीको उही जवाफ छ-छिट्टै।
नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालसँग चिनियाँ राष्ट्रपति सी
प्रधानमन्त्रीले यसपटक पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको निम्तो दिए र‘छिट्टै’भ्रमण हुने आश्वासन पनि पाए। अघिल्लो पटक भ्रमण रद्ध हुनुअघिसम्म हरेक जसो नेताहरुले चिनियाँ राष्ट्रपतिले छिट्टै नेपालको भ्रमण गर्ने बताउने गर्दथे। तर त्यो‘छिट्टै’अहिलेसम्म आईपुगेन। तर नेताहरुले भन्ने गरेको ‘छिट्टै’को आयतन कति फैलिएको छ भन्ने मापन गर्न असंभवप्रायः छ। यसपटक पनि प्रचण्डले भने-चिनियाँ राष्ट्रपतिले ‘छिट्टै’ नेपालको भ्रमण गर्नुहुनेछ।
बेइजिङ्स्थित नेपाली दूतावासमा रात्रीभोज गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनको तीव्र आर्थिक विकासबाट नेपाल पनि लाभान्वित हुनसक्ने संभावना देखे। चीनले यति रफ्तारमा गरेको प्रगतिले नेपालको मुहार फेरिनसक्ने पनि ठाने। संभावना नै संभावनालाई कहिले यथार्थमा रुपान्तरण गर्ने भन्ने उनीसँग ठोस जवाफ थिएन। उनले भने- छिट्टै। नेपालले ‘छिट्टै’ चिनियाँ चीनसँगको हातेमालोमा नेपालले पनि समृद्धिको ढोका खोल्नसक्नेछ। पत्रकारहरुले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ कार्यक्रमको समझदारीपत्र (एमओयू)कहाँ पुगेको छ भनेर सोधेपछि प्रधानमन्त्रीले भने- अन्तिम तयारी भइसकेको छ। आगामी मे महिनामा बेइजिङ्गमा हुने रोड एण्ड बेल्ट इनिसियटिभ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालबाट उच्चस्तरीय सहभागिता हुन्छ। छिमेकी भएको नाताले नेपालले प्रचूर फाइदा लिनसक्ने वस्तुस्थिति देखेपनि समझदारी कुन मितिमा पूरा हुन्छ भन्ने ठोस् जवाफ दिन सकेनन् तर दोहोर्‍याए- छिट्टै।
आफ्नो चीन भ्रमणबाट चीनसँगको अविश्वास हट्ने र आपसी सम्बन्ध अझै गहन हुने प्रधानमन्त्रीको अपेक्षा छ। भ्रमणमा निस्कनुअघि पनि उनले यस्तै भनेका थिए। चिनियाँ राष्ट्रप्रमुख, उपप्रधानमन्त्री, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु लगायतसँग भेटेर उनले आफूमाथि लाग्दै आएको दक्षिणपरस्तको आरोपलाई मत्थर पार्न कोशिष गरे। त्यसको नतीजा उनकै शब्दमा ‘छिट्टै’ देखापर्ला। उनले भने झैं के वर्तमान सरकारप्रतिको अविश्वासको वातावरण ‘छिट्टै’ हट्ला त भन्ने प्रश्नचाहिं कुन समय अन्तरालमा निराकण हुन्छ भन्ने संशय भने यथावत् नै छ। तर उधारो आश्वासन नेपाली राजनीतिज्ञको जिब्रो फट्कार्ने एक परम्परागत माध्यम बनिसकेकोमा दुई मत छैन।
बाबु भोट माग्न घरदैलोमा, छोरा हिरासतमा
निर्वाचनमा खर्च दोब्बर बढ्नुकाे यस्ता छन्, ६ कारण
समानुपातिकबाट दुईसय ५६ जनाको नाम हट्यो, हेर्नुहोस् (नालीबेली सहित)
चुनावको बेला चार दिनसम्म विद्यालय बन्द हुने
प्रकाशको काजकिरीया नहुने, मंसीर ५ मा चितवनमा श्रद्धाञ्जली सभा
Copyright © 2017 reserved with ekhabaronline.com || Design By Suresh Acharya